ချစ်ရမှာ ကြောက်နေသူတွေ ဒီကမ္ဘာမှာ တကယ်ရှိတယ် -
[Zawgyi] သားသမီးမွေးမြူခြင်း အတတ်ပညာဆိုတာ အင်မတန်ကို သိမ်မွေ့ခက်ခဲလှတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါကို မိဘတိုင်း တတ်သင့်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုလို့ ကျွန်မအနေနဲ့ နားလည်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သားသမီးတွေကို ကြီးအောင် မွေးလာရလေ….ဒါကို…
[Zawgyi] ခုတစ်လော ကလေးတွေ သတ်သေတဲ့ သတင်းတွေပဲ ကြားနေရတယ်။ ပထမ အစမ်းမှာ ပထမမရလို့ သတ်သေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူ၊ လပတ်စာမေးပွဲမှာ တစ်ဘာသာကျလို့ သတ်သေတဲ့ ၈…
[Zawgyi] သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်လာကြတာ နှစ်အနည်းငယ်လောက်ရှိလာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေလည်း ပျောက်စပြုလာပြီလို့ ပြောရတော့မှာပါပဲ။ ဒီကြားထဲမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံးပန်းနေရတာတွေ၊ သားသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိစ္စ ၊ပညာရေးကိစ္စတွေအပြင်…
“ဟောင်းပေမယ့်လည်း ကောင်းနေဆဲပါပဲ မသစ်ပေမယ့်လည်း ကိုယ်အချစ်မလျော့ပါတယ်” ဆိုတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ မောင့်တစ်ပတ်နွမ်းသီချင်းကို သတိရမိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခင်တုန်းက “အသွားမတော်တစ်လှမ်း အစားမတော်တစ်လုတ်” ဆိုသလို ခံစားချက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ…
ကျွန်မတို့ အများစုထင်မှတ်နေကြတာရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်က သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်သလဲ၊ မေတ္တာရှိသလဲဆိုတာကို မပြောရင်လည်း သူက သိပါတယ်လို့ ယူဆနေကြတာပါ။ ကျွန်မတို့လို အိမ်ရှင်မတွေက အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာရင် ခင်ပွန်းကိုလည်း…
လောကကြီးကပေးတဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေရဲ့တာဝန်
[Zawgyi] တကယ်တော့ လောကကြီးမှာ ကျွန်မတုို့ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လှုပ်ရှားရတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက တာဝန်ကြီးလှတယ်လို့ ကျွန်မတော့ လက်ခံယူဆမိပါတယ်။ သမီးဘဝမှာ မိဘတွေကို ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်အကျွေးပြုရတယ်။ အဘိုး၊…
စုံတွဲတိုင်းဟာ စေ့စပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားကာလတွေကို ဖြတ်ကျော်ရတော့တာပါပဲ။ တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲ ကျင်းပမဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရ၊စီမံခန့်ခွဲနေရတာဟာ အလုပ်များလွန်းပါတယ်။တကယ်တော့ မင်္ဂလာပွဲဆိုတာဟာ “အိမ်ထောင်ပြု၊ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်စုတ်ထိုး ဤသုံးမျိုးချက်မပိုင် နောင်ပြင်ရန်ခက်သည့် အမျိုး” လို့…
ငြင်းပယ်ခံရတိုင်း ကျရှုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး
[Zawgyi] ငြင်းပယ်ခံရတိုင်း ကျရှုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်အရမ်းမြတ်နိုးတဲ့အရာတစ်ခုကို မရလိုက်ရင် စိတ်ညစ်ရတယ်၊ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ရင် ဝမ်းနည်းရတတ်တယ်။ လိုချင်တာကို မရခဲ့တော့ ဘဝမှာ လူဖြစ်ရှုံးပြီလားလို့ တွေးသွားတတ်ပါတယ်။ လိုချင်တာ မရခဲ့ပေမယ့် ပိုကောင်းတာလည်း ရတတ်ပါတယ်။ ကဲ . . . ကိုယ့်အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်မဖော်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် ပိုလှတဲ့ အိပ်မက်ကို ဖန်ဆင်းသွားတဲ့ လူသားတွေရဲ့အကြောင်းကို ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ Wall Street English ၏ အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို စစ်ဆေးပါ။ ဆီဘွန်ဂီလီဆမ်ဘို (Sibongile Sambo) ဆီဘွန်ဂီလီဆမ်ဘို (Sibongile Sambo) ကို ၁၉၇၄ခုနှစ်မှာ […]
Customer is always right ဆိုတာ
Customer is always right ဆိုတာ “Customer is always right” တဲ့။ ဒါဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းရောင်းချသူတွေ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးကြီး ငယ်ငယ်တွေကအစ စားသုံးသူကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ တကယ်တော့ Customer ဆိုတာ ကိုယ့်ဝင်ငွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ ရတနာသိုက်ကြီးပါပဲ။ ဒီတော့ ရတနာတွေကို စောင့်ရှောက်သလို စောင့်ရှောက်သင့်တာပေ့ါ။ လက်တွေ့မှာတော့ ဒီလို တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လား။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ တန်ဖိုးထားမှုစံဟာ စားသုံးသူက အမြဲမှန်တယ်ဆိုထားပေမယ့် ကိုယ့်ဝန်ထမ်းက ကိုယ့်စံကို မလိုက်နာတဲ့အခါ၊ မလိုက်နာသလို ဖြစ်သွားတဲ့ အခါ၊ Mid Management Level လောက်က အုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖျင်းတဲ့အခါ Customer […]
Articles How To Techchnology
Window 10 မှာ Creators Update ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဒီတစ်ခါ ဖော်ပြပေးမှာကတော့ Windows 10 အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် အသစ်ထွက်တဲ့ Windows 10 Fall Creators Update ကို သင့်ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လို Update လုပ်ရမလည်း ဆိုတာ အခရာကနေ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ Microsoft ရဲ့ မတူညီတဲ့ Version တွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Numbering System ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပြီး အချက်အလက်တွေကို ဘယ်မှာရှာရမလည်းဆိုတာလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Windows 10 Creator Update ရဲ့ တရားဝင် Version ကတော့ Version 1703 ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ သင့်ကွန်ပျူတာက Version 1607 Run နေတာဆိုရင်တော့ သင့် ကွန်ပျူတာဟာ Version အဟောင်းဖြစ်တဲ့ […]
ပန်းဆိုးတန်းက ၀က်ဒုတ်ထိုး ဘဲဥ ကြာဇံ ခေါက်ဆွဲ ကော်ပြန့် နာမည်ကြီးဆိုင်ကြီး ဘယ်ပြောင်းသွားလဲ?
[Review,Information,Video] [Unicode below] တချိန်က ပန်းဆိုးတန်း အထက်ဘလောက် (အနော်ရထာလမ်း) မှာ နှစ်ဆိုင် သုံးဆိုင်ထိ ခွဲရောင်းခဲ့တဲ့ လမ်းဘေး ၀က်သားဒုတ်ထိုးဆိုင်လေးကို မှတ်မိမယ်ထင်တယ်ဗျ။ ထိုင်စားဖို့တောင် တန်းစီရလို့ ရုံးဆင်းရင် ပါဆယ်ဆွဲပြီး ပြန်ကြတဲ့ သူတွေ မနည်းမနောပါ။ ခုဒီဆိုင်လေးက လမ်းဘေးမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ မြေညီထပ်လေးငှားပြီး အိမ်ဆိုင်လေး သပ်သပ်ရပ်ရပ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေး ဖွင့်ထားနေပါပြီ။ ဆိုင်နာမည်က “Ko Gyi” ကိုကြီးကြာဇံဆိုင် ဆိုပဲ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ။ လိပ်စာက ၃၇ လမ်း မဟာဗန္ဓုဘလောက်နဲ့ နီးမယ်။ အပေါ်ဘက်ခြမ်းပေါ့။ ကားရပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ မြို့ထဲမှာ လမ်းလျှောက်တာ အဆင်ပြေဆုံးပါ။ […]
ဒေဝါလီခံရမယ့် အဖြစ်မှ အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်အောင် ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ Tesla Inc
ဒေဝါလီခံရမယ့် အဖြစ်မှ အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်အောင် ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ Tesla Inc [Zawgyi] Tesla Motors လျှပ်စစ်ကားကုမ္ပဏီကို ၂ဝဝ၃ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှာ အီလွန်မက်စ် (Elon Musk) ၊ ဂျေဘီ စထရက်ဘဲလ် (JB Straubel) ၊ မာတင် အီဘာဟက် (Martin Eberhard) ၊ မားစ် တာပန်နင်း (Marc Tarpenning) နဲ့ အီရန်ရိုက် (Ian Wright) တို့ ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ လျှပ်စစ်ပညာရှင်ကြီး နီကိုလာ တက်စ်လာ (Nikola Tesla) ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Tesla Motors လို့ နာမည်ပေးလိုက်တာပါ။ အခုချိန်မှာ Tesla […]
Channels D Phyo
သားလေးကို အချိန်ပေးလာတဲ့ D ဖြိုး
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် D ဖြိုးမှာ သားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ Alvin Phyo တဲ့။ ကလေးရလာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ယောက်စလုံး အရမ်းကို ပျော်ရပါတယ်။ ကလေးယူတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာတဲ့အချိန်မှ ရလာတဲ့ကလေးလေးပါ။ အရမ်းလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ကလေးရလာမှ ကျွန်တော်လည်း ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အရမ်းကို လေးနက်လာတယ်။ သူ့အတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားတယ်၊ တွေးထားတယ်ပေါ့။ အတွေးတွေ တကယ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးက အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမှာပေါ့။ သားလေးရလာပြီးမှ ဘာတွေပြောင်းလဲလာတုန်းဆိုရင် အရင်တုန်လူပျိုတုန်းက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်လို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာ၊ အိမ်ပြန်လည်း နောက်ကျတယ်။ ကြိုတွေးထားလို့ မရဘူး။ အခုဆိုရင် အလုပ်ပြီးရင် အိမ်က ဖုန်းဆက်မခေါ်ရင်တောင် အချိန်မှန်ပြန်လာတယ်။ သားလေးလည်း ရလာပြီဆိုတော့ အခုအချိန်မှာကျတော့ အများကြီးစဉ်းစားလာတယ်၊ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေလည်း ဖြစ်လာတယ်။ အလုပ်ကိစ္စပြီးရင် […]
ဟိုတုန်းကတော့ နယ်ချဲ့တယ်၊ ကျွန်ပြုတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလာသိမ်းပြီး ရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကို သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်က ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံအထဲထိဝင်လာတာမဟုတ်တော့ဘဲ အဝေးကနေပြီး လှမ်းသိမ်းပိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို သိမ်း ပိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို သိမ်းပိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံကို အနောက်တိုင်းဆန်လာအောင် သွယ်ဝိုက်သိမ်းသွင်း ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မြန်မာလူငယ်တွေဟာ သိသိသာသာရော၊ မသိမသာနဲ့ရော အနောက်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အောက်ရောက် သွားပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ အနောက်တိုင်းက အရာအားလုံးကို အထင်ကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အနောက်တိုင်း ကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာ၊ အတွေးအခေါ်အားလုံးချည့်နဲ့နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာဆီမှာက အနောက်တိုင်းမှာလို အခွင့်အလမ်းမပေါ်များပါဘူး။ အနောက်တိုင်းမှာက ကိုယ့်ဝါသနာပါတာကိုယ်လုပ်၊ […]
ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ သတင်း ၅ ခု (၃၀.၈.၂၀၁၇)
[Zawgyi] (၁) သန်းနဲ့ချီတဲ့မူဆလင်တွေဟာ မက္ကာမြို့ဆီကို နှစ်စဉ်လာရောက်လေ့ရှိပြီး ဒီနေ့ဟာ သူတို့ Hajj လုပ်တဲ့ ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်ပြုဆုတောင်းမယ့်သူတွေဟာ မက္ကာမြို့က ဗလီကြီးဆီမှာ Hajj လုပ်မယ့်နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းက စုရုံးရောက်ရှိနေကြတာပါ။ (၂) မင်းသားကြီး အမီရာခန်း (Aamir Khan) ရဲ့ “Dangal” ဇာတ်ကားဟာ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာ ရုံစတင်တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ဝ၂,ဝဝဝ (ရူပီး ၄.၄၈သန်း) ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၃) တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ပစ်ပေါက်ကစားရတဲ့ပွဲတော်ကို စပိန်နိုင်ငံမှာ ဒီနေ့စတင်ကျင်းပနေပါပြီ။ ဒီပွဲတော်ကို စပိန်နိုင်ငံ အရှေ့ဖက်၊ မြေထဲပင်လယ်နဲ့ ကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာ Bunol မြို့လေးမှာ ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ၁၉၄၅ […]
Huawei Mate 10 ကို This Is Not A Smartphone လို့ဆိုလိုက်တဲ့ Huawei
Huawei Mate 10 ကို This Is Not A Smartphone လို့ဆိုလိုက်တဲ့ Huawei Huawei Mate 10 Smartphone ဟာ လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ စတင်ကြေငြာသွားမှာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်အချိန် ၂ ပတ်လောက်ပဲ လိုတော့တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Huawei ကနေ သူရဲ့ Flagship ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ့် Mate 10 Smartphone အတွက် Teaser တွေမျိုးစုံထုတ်နေပြီး အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ AI နည်းပညာပါဝင်လာမယ့် Huawei Mate 10 ဟာ သာမန် Smartphone တစ်ခုမဟုတ်ဘူး “This is […]
Entertainment Movie mpt
[Zawgyi] ရင်ဘတ်ထဲကဓားဇာတ်ကားနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို ဘာလို့အကယ်ဒမီမှန်းကြတာလဲ လာမယ့်အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ရင်ဘတ်ထဲကဓား ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ အကယ်ဒမီရနိုင်တယ်ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေက မျှော်မှန်းနေကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ စာရေးဆရာမလမင်းမိုမိုရဲ့ အမှောင်ထဲမှာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနမူနာအရ မင်းသမီးအဓိကဇာတ်ဖြစ်ပြီး အရာရာကိုမျှော်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားတတ်ပြီး အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတဲ့ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိူးကို ထိထိမိမိတင်ဆက်ထားပါတယ်။ သူမကို ဘာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အကယ်ဒမီမှန်းလဲဆိုတာကို သူမရဲ့သဘာဝကျလွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပေးချင်တဲ့ရသကို ပရိသတ်ရင်ထဲကို တိုက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်နိုင်တာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်ထဲကဓားရုပ်ရှင်ကားမှာ အကယ်ဒမီပြေတီဦး၊ အကယ်ဒမီထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ အကယ်ဒမီမြတ်ကေသီအောင်၊ နေဆန်း နဲ့ မေကဗျာတို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဇာတ်ကားမှာ ပြေတီဦးနဲ့ […]